ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ကျောက်ခဲ မဟုတ်ပါ”
ယနေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင် လွတ်လပ်သော လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ရှိ သော လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အားလုံးသော မြန်မာပြည်သူများ ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ..
လွတ်လပ်ရေးနေ့လေးမှသည် လူသားတိုင်း အမြန်ဆုံး လွတ်လပ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်
ကျောက်ခဲတော့ မဟုတ်ဘူး ကိုပေါရေ၊ ဒါပေမဲ့ ကျောက်ရုပ်တွေများလားလို့။ ကျမလည်း အတွေးရှိနေတာကြာပြီ။ ချမရေးဖြစ်ဘူး ... ကိုပေါ ကျောက်ခဲဖတ်ပြီးတော့ ကျောက်ရုပ်ရေးဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။
မင်္ဂလာပါ။ နှစ်သစ်မှာ မိသားစုတွေ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ကိုပေါရေ အခုတလော Face Book မှာ မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေနဲ့ တွေ့ပြီး အလွမ်းသယ်နေလို့ ဘလော့ဂ်ဘက် အရောက်ကျဲသွားတယ်။ အခုတော့ ပြန်လာပြီ။ ကျောက်ခဲမဟုတ်ပေမဲ့ မမေဒါဝီ ပြောတဲ့ ကျောက်ရုပ်နဲ့ စက်ရုပ်က များနေတော့ ခက်တယ်။
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာပါဗျာ။ ကိုပေါ ပို့စ်တွေက အက်ဆေး ပုံစံ များလာသလိုပဲ။ တခါတခါ ကျ အီသွားသလိုပဲ၊
၂၀၁၀ မှာ နည်းနည်း ပုံစံ ပြောင်း ရေးကြည့်ပါလား၊
တရွာလုံးနဲ့တယောက်ဖြစ်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုအစက ရွံတယ် နောက်သနားတယ် အခုစိတ်ကုန်တယ်၊ကြံဖန်ချုပ်နှောင်တာ့လဲကြာပြီ၊လုပ်ကြံတာလဲ အခါခါ၊
အညှိုးတရားတွေဖျောတ်ပီး ဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလား? ပြည်သူတွေ ဒါကိုမျှော်နေကြတာ တကဲ့ စိတ်အမှန်ပါ။
မိန်းမတယောက်ကိုကြောက်နေရတဲ့ စကားရင်ဆိုင်မပြောရဲတဲ့ သူရ တွေကိုအထင်သေးသလိုရယ်ချင်မိတယ်။
ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းသာလျှင် အကောင်းဆုံးညှိနှိုင်းသင့်တာမို့လုပ် ရဲတဲ့ ပြည်သူကိုငဲ့တဲ့ စကားပြောရဲတဲ့ ဗိုရ်ချုပ်တွေပေါ်ပေါက်ပါစေ။
MI35 အစား ပေါ့ပါးတဲ့apache ဝယ်ချင်တယ်။ ယိုးဒယားရဲ့္ဖ F16 ကိုF22 နဲ့sukhoi 30 နဲ့ စီးချင်းထိုးချင်ပြီ။
တရုတ်ဂုတ်သွေးစုတ်တာဗမာပြည် ထဲ တရုက် ပြည်နယ်ထောင်ခံရတာခံပြင်းတယ်။
နိုင်ငံခြားမှာကျွန်မခံချင်တော့ဘူး passport အနီကိုင်ပီး immigration မှာခေါင်းမော့ရင်ကော့ပီးဖြတ်သွားချင်တယ်၊
ASEAN နိုင်ငံတွေလဲ အာရှပါဘဲ သူ့လူမျိုးသူတန်ဖိုးထားလိုက်ကြတာ၊
နိုင်ငံရေးနားမလည်တဲ့ဗမာဖြစ်ရတာ ဂုံယူချင်သူ တာဝန်ကျေအခွန်ထမ်းပြည်သူတဦး
Most of peoples had tried to get လူ့အခွင့်အရေး by different ways.
But not systematic way.
If you haveagood plan, you can lead.